Semalt Inoponesa Makuru Mazhinji eGoogle Analytics Filters
Zvinotsvina zveGoogle Analytics inzira yakanakisisa yokugadzirisa uye kuchinja data mukati rose peji yekutarisa kwewebsite yako. Inogona kushandiswa kuisa nekuisa pane ruzivo, uye kuita shanduko chaiyo iyo iyo deta ichaita seyi kuGoogle Analytics. Uyezve, zvinyorwa izvi zvinotibatsira kushandura iyo mashoko kuitira kuti mavara ayo akashandurwa agadziriswe kuva maitiro akafanana uye inosvika pane zvinotarisirwa nevashandisi. Somugumisiro, unowana mikana yakawanda yekukura bhizinesi rako paIndaneti, uye Google Analytics inogona kushandisa mafiritsi kubva pane rimwe peji kuona kune imwe kuitira kuti nzvimbo yako yekutsvaga kwewebsite iwedzere kusvika pamwero mukuru. Kana imwe nguva data yakanyatsogadziriswa, unogona kuona migumisiro yekupedzisira mumishumo yeUI yenhoroondo yako yeGoogle Analytics - it managed services provider.
Ivan Konovalov, the Semalt Mutengi Wakabudirira Mutengi, anorondedzera pasi apa mazita makuru e filters yeGoogle Analytics:
Chikwata chekutanga chinonzi spambot filter. Icho chinonakidza uye chinoshamisa, uye zviri nyore kutarisa muZviona Zvirongwa zveParidzi. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kushanyira chikamu che admin uye tsvaga Bot Botter sarudzo. Dzvanya izvo zvasarudzo uye tanga zvigunwe zvevhesi dzose dzePI dzinoshusha. Iva nechokwadi chekuti ubvise zvigunwe uye bots nekushandisa sarudzo iyi uye chengeta bhokisi Shandisai musati mavhara firiji. Iro spambot filters inobatsira kuti ubvise mabhoti uye tsanga uye uone kuti hutano hwako webhusaiti yepaiti .
Usabvisa mukati IPs
Imwe nzira ndeyokuti iwe unofanira kuisa kunze kwePs mukati uye dzose iyo maIndaneti inotarisa kuti inoshushwa kwauri.Iyo inogona kuitwa kubva kuGoogle Analytics account. chisarudzo.Hano iwe uchaona Ita Filter sarudzo yaunofanirwa kuvhara kuti ugadzire mafikita matsva panzvimbo yako.
Chokutanga, unofanira kusarudza kana uri kutarisa kuti uite mafiritsi matsva kana kuti unoda kushandisa mafirita epfuura pane yako. Kana uchinge wakasarudza, sarudzo inotevera ndeyokuti uwane nhamba yakakwana yezvinyorwa uye uzviise pamapeji akawanda sezvinogona. Dzvanya Sarudza chisarudzo kana waita zvisikwa uye yava nguva yekuzviisa panzvimbo yako. Munguva iyi, zvinokosha kuziva mutsauko pakati pezvinotanga kufungidzirwa uye tsika dzinoshandiswa. Kuti ugare wakasununguka, tinoda kutaurira kuti mafaira ekufananidza ndeaya mapepa ekuti iwe unogona kushandisa kuti ugadzire mafikisi zvakananga. Kune rumwe rutivi, tsika dzinoshandiswa dzinokubvumira kuchinja uye kugadzirisa zvirongwa zvezviputa zvako vasati vashandurwa.
Shandisai URL imwe neimwe kuti iite pasi
Icho chiito chinokosha uye haufaniri kuregererwa chero zvakakosha. Iwe unofanirwa kumanikidza URL kubva pachikwata kusvika pasi pasi uye kugadzirisa zvirongwa zvavo maererano nemitemo nemirau yeGoogle Analytics. Kana uine mapeji akawanda ane URL dzakasiyana, unofanira kuchinjira kumadutukasi nokukurumidza. Usavabvumira kuti varatidze mu injini yekutsvaga migumisiro kusvikira kana kunze kwekunge mavaisa pasi.
Kana uchinge wakagadzirisa zvirongwa zvepamusoro uye ukashandisa mafiritsi zvakakodzera, hutano hwewebsite yako yekutengesa huchatanga kuvandudza. Zvinyorwa izvi zvinofanira kuiswa panzvimbo iyo chete kana yakashungurudzwa kana kuti isingazivikanwi maIndaneti. Kana zvisina kudaro, hapana chikonzero chekushandisa izvi mafungiro.